Play 47 340
Umlobi: uCyril, uFrank Safranek, uPierre Marchadier, uSharky, u-Antoine Osmond, Mevel Nicolasr
Itholakala 3 ekukhombisa repaints: Marine, ekukhombisa ukucabhela. Umsindo zinhle kakhulu. Ngenxa abalobi for umsebenzi quality.
I Dassault Rafale kuyinto French indiza wezempi omnirole athuthukiswe futhi kukhiqizwa ngumkhiqizi French Dassault Aviation. Kwalowo isizukulwane eyaziwa ngokuthi i- "4 +" fighter aircraft, it kuwumphumela uhlelo eziqalwe in the 1980s maphakathi nawo, izilinganiso amabutho French ahlomile, okuyinto ihlose ukuba esikhundleni 2025-2030 Nezinhlobo eziyisikhombisa ndiza enkonzweni kuze kube Air Force and Navy. I Rafale futhi kufanele agcwalise yonke ohambweni ngaphambili owayengenalusizo bathunyelwa kula amadivaysi, kuhlanganise kungenzeka isiteleka zenuzi.
I Rafale kuyinto indiza fighter nge delta iphiko canard close, powered by ezimbili Snecma M88 afterburning turbojets kanye kagesi zokulawula indiza okukuvumela ukuba enze izibalo engenakwenzeka on ndiza kunazo ancintisane umthwalo isici sifinyelela 10 g ngesikhathi ALPHA isethulo. Ngokwesibonelo, i-Eurofighter wazama kokufika on ukudluliselwa. I Rafale itholakala izinguqulo ezintathu: Rafale M, isihlalo ngendiza for ukusebenza kusukela umkhumbi othwala izindiza, futhi Rafale Rafale B no-C, ngokulandelana seater kanye enezihlalo ezimbili izindiza imisebenzi olwenziwe base ezweni. I Rafale okwazi lafinyelela ngesivinini esiphezulu 2203 km / h (Mach 1.8), kanye esiphezulu Inkokhelo umthamo wayo of 9500 kg. ngemininingwane yalo iwukuba kanyekanye ukwenza ukuthula eziningana nge lakho ngendlela ezehlukeneyo kakhulu, yingakho indiza elithi "omnirole."
It wathunywa on 18 May 2001 futhi 31 December 2011, 105 amakhophi we Rafale wezempi waseFrance ukuhlomisa 286 ocelwe uhulumeni waseFrance. Proposed emazweni angaphandle ukuba amazwe amaningana (United Arab Emirates, Brazil, India, njll ..), The Rafale uye kude kangaka hhayi wathola oda ngokuqinile. Nokho, Dassault Aviation ongene kunezingxoxo okukhethekile in February 2012 for 126 izindiza for Indian Army for ingqikithi $ 12 billion okwenza kube inkontileka enkulu kunazo zonke ezake yokuthekelisa won by izingalo France.
I Rafale iyahambisana abathwali izindiza nge yesikhulumi, okusekelwe sekusetshenziswa Dassault Aviation. (Wikipedia)